မိုးထက်မြင့်(နည်းပညာ): Core i3,Core i5,Core i7 ကွာခြားချက်များ
Posted by အေကေတီ at 3:07 PM
RA December 17, 2011 7:47 PM
ကွန်ပြုတာနဲ့ပက်သက်တာအားလုံး နားလည်ချင်တယ်၊အခုလိုရှင်းပြထားတာ ကျေးဇူးပါ၊၊
မိုးချစ်သူ December 21, 2011 12:12 PM
ဒီဆိုဒ်လေးကို အခုမှစဖတ်ဖြစ်တာပါ... အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်... သိတာတောင်နောက်ကျနေတယ်... ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သတ်တာတွေသိချင်တယ်..သူများတွေကိုလဲရှင်းပြချင်တယ်...ဒါ့ကြောင့်ဒီဆိုဒ်လေးကို နောက်လဲဝင်ဖတ်မယ်နော်..
Anonymous December 22, 2011 12:54 AM
ကွန်ပျုတာနဲ့ပတ်သပ်တာလေးတွေကို တင်ထားတဲ့အတွက်နောက်လဲ လာလည်မှာပါ ခုလိုတင်ပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ
Leaf February 09, 2012 3:36 PM
"Nehalem ကထုတ်တဲ့ core i3 ကို 2010 ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ၊ core i5 ကို စက်တင်ဘာလ ၈ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ corei7 ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်း" ဆိုတော့လွဲနေသလားလို့။
i3 ပြီးမှ i5, i7 လာတာမဟုတ်ဘူးလား?
ကိုကိုမွှေး March 30, 2012 12:37 AM
phung bella June 26, 2012 8:20 PM
kochanmg2012 July 02, 2012 10:46 PM
ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သပ်တာလေး တေါ တင်း ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Mary Grace July 03, 2012 6:52 PM
Anonymous July 07, 2012 8:30 PM
Thanks you for offer your education and softwares.
Mary Grace July 16, 2012 8:59 PM